Amagagasi we-Ski kanye ne-snowboard snowball - i-ULLER
I-SKI NE-SNOWBOARD Glasses YABADLALI
Izikebhe zethu zokushushuluza eqhweni kanye neqhwa zenziwe ngabasebenza mahhala. Ukusebenza okuphezulu kwezobuchwepheshe ukuqinisekisa ukusebenza okuhle kakhulu nokuthembeka okuphezulu ezimweni ezimbi kakhulu ngesikhathi seFreeride practice. Amasiki ethu okushushuluza enziwa ngokususelwa kuzidingo iqembu lethu le-freerider elizifunayo kumkhiqizo zombili ngokwezinto ezibonakalayo nangenduduzo. Lapho imikhiqizo isivivinyiwe, siqoqa lonke ulwazi oludingekayo ukuze sikwazi ukuthuthukisa ukulungiswa okudingekayo efektri ukuhlangabezana nezidingo. Yimikhiqizo ye-premium esezingeni eliphakeme kakhulu.
I-X-POLAR EMAGNETIC LENS MASKS
Okuluhlaza okwesibhakabhaka / obomvu
Okuluhlaza okwesibhakabhaka / obomvu 225.00 €
IWall White / Mnyama
IWall White / Mnyama 225.00 €
IWall Red / Mnyama
IWall Red / Mnyama 225.00 €
Udonga Olumnyama / Olintshi
Udonga Olumnyama / Olintshi 225.00 €
IWall Black / Isibuko
IWall Black / Isibuko 225.00 €
I-Snowdrift Luhlaza / Mnyama
I-Snowdrift Luhlaza / Mnyama 225.00 €
I-Snowdrift Emhlophe / Ebomvu
I-Snowdrift Emhlophe / Ebomvu 225.00 €
I-Snowdrift Blue / Gold
I-Snowdrift Blue / Gold 225.00 €
I-Snowdrift Emnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka
I-Snowdrift Emnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka 225.00 €
I-Snowdrift Emnyama / Ephuzi
I-Snowdrift Emnyama / Ephuzi 165.00 € 225.00 €
MASKS NGAMAX-POLAR PHOTOCHROMATIC LENSES
I-Avalanche Mpunga / Mnyama
I-Avalanche Mpunga / Mnyama 225.00 €
I-Avalanche Luhlaza / Mnyama
I-Avalanche Luhlaza / Mnyama 225.00 €
Okumnyama / Okumnyama 225.00 €
I-Avalanche Blue / Mnyama 225.00 €
Okubomvu / Okumnyama okumile
Okubomvu / Okumnyama okumile 125.00 € 225.00 €
Okumhlophe okumhlophe / Okumnyama
Okumhlophe okumhlophe / Okumnyama 120.00 € 225.00 €
I-X-POLAR FIXED LENS MASKS
I-Avalanche Emnyama / Ephuzi 99.00 € 185.00 €
I-Avalanche Blue / Grey 99.00 € 185.00 €
I-Avalanche Orange / Mnyama 99.00 € 185.00 €
I-Avalanche Orange / Blue 99.00 € 185.00 €
I-Avalanche White / Mnyama 99.00 € 185.00 €
I-Avalanche White / Cherry 99.00 € 185.00 €
IBlizzard Emnyama / Emnyama
IBlizzard Emnyama / Emnyama 120.00 €
IBlizzard Black / Cherry
IBlizzard Black / Cherry 120.00 €
IBlizzard Emnyama / Ebomvu
IBlizzard Emnyama / Ebomvu 120.00 €
IBlizzard Emnyama / Ephuzi
IBlizzard Emnyama / Ephuzi 120.00 €
IBlizzard Green / Isibuko
IBlizzard Green / Isibuko 120.00 €
IBlizzard Grey / Bomvu
IBlizzard Grey / Bomvu 120.00 €
IBlizzard Red / Isibuko
IBlizzard Red / Isibuko 120.00 €
IBlizzard White / Igolide
IBlizzard White / Igolide 120.00 €
UCliff Omnyama / uCherry 69.00 € 120.00 €
Cliff Okumnyama / Oluhlaza 69.00 € 120.00 €
Cliff Okumnyama / Mpunga
Cliff Okumnyama / Mpunga 69.00 € 120.00 €
I-Cliff Blue / Bomvu 120.00 €
I-Cliff Blue / Ephuzi
I-Cliff Blue / Ephuzi 69.00 € 120.00 €
Cliff White / Luhlaza okwesibhakabhaka 69.00 € 120.00 €
ICornice Mnyama / Mnyama
ICornice Mnyama / Mnyama 185.00 €
ICornice Mnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka
ICornice Mnyama / Luhlaza okwesibhakabhaka 185.00 €
ICornice Mnyama / Isibuko
ICornice Mnyama / Isibuko 185.00 €
ICornice Blue / Mnyama
ICornice Blue / Mnyama 185.00 €
ICornice Grey / Cherry
ICornice Grey / Cherry 185.00 €
ICornice Rose / Mnyama
ICornice Rose / Mnyama 185.00 €
ICornice White / Igolide
ICornice White / Igolide 185.00 €
ICornice Ephuzi / Mnyama
ICornice Ephuzi / Mnyama 185.00 €
Okumnyama okumnyama / Oluhlaza okwesibhakabhaka 99.00 € 185.00 €
Okumnyama okumnyama / Cherry 89.95 € 185.00 €
Okumnyama okumaphakathi / Okuphuzi 99.00 € 185.00 €
Iminti emile / Mnyama 99.00 € 185.00 €
I-Vertical Mint / Grey
I-Vertical Mint / Grey 99.00 € 185.00 €
Okubomvu / Okumpunga okumile 99.00 € 185.00 €
Okumhlophe okumhlophe / Okubomvu
Okumhlophe okumhlophe / Okubomvu 99.00 € 185.00 €
I-KIDS Glasses - IZINSIMU ZESITOLO
I-Storm Blue / Ephuzi 69.00 € 120.00 €
Isivunguvungu Esimnyama / Mpunga 69.00 € 120.00 €
Isivunguvungu Esimhlophe / Oluhlaza okwesibhakabhaka 69.00 € 120.00 €
Isiphepho Ebomvu / Oluhlaza okwesibhakabhaka
Isiphepho Ebomvu / Oluhlaza okwesibhakabhaka 69.00 € 120.00 €
Isivunguvungu Esimnyama / Luhlaza 69.00 € 120.00 €
Isivunguvungu Esimnyama / Cherry 69.00 € 120.00 €
AMAGOGGLE NAMASKI NAMA-MASKI E-SNOWBOARD AMADODA NABESIFAZANE
KWADALWA NGABE FREERIDER.
Siyaziqhenya ngokwakha imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu emakethe. Singumkhiqizo wokukhanya nezesekeli lapho silwela khona nsuku zonke ukuba nemikhiqizo emihle emakethe. Ukwakhiwa, ukukhiqizwa nokusatshalaliswa kwemikhiqizo yefeshini ye-premium optical, kufaka phakathi amaski okushushuluzanamaski e-snowboard enziwe ngokusebenza okuphezulu kakhulu. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ku-www.ullerco.com uzothola izinhlobonhlobo zemikhumbi ephezulu ye-Uller® brand ski onayo. Konke ukucaciswa kwezobuchwepheshe kwezigqoko zethu zeqhwa namaski okushushuluza kuyatholakala encazelweni yeqoqo ngalinye. Kodwa-ke, singakutshela ukuthi sinamamodeli amaningi we-photochromic ski goggles, izibuko zokushushuluza ezinamalensi kazibuthe ashintshanayo, kanye nezibuko zokushushuluza eqhweni, kuye ngokutholakala kweqoqo ngalinye esitokweni sethu.
UBUCHWEPHESHE OBUPHAKATHI BOSETSHENZISWA KANYE NEZIMISEBENZI
Eminyakeni edlule, i-Uller® ithweswe umqhele njengenye yezimpawu ezihamba phambili kakhulu futhi ezihola phambili emakethe, nangokusebenza okuphezulu esigabeni sayo. Eqinisweni, yonke imigwaqo yokushibilika eqhweni i-Uller® esiyinikezayo yenziwe ngaphansi kwesipiliyoni sabasubathi abaziqonda mathupha izidingo zabashushuluzi nabashibilika eqhweni. Lokhu kusho ukuthi ngamamaski e-ski aklanywe ngabasebenza ngokuzimela, nakwabanye abasebenza ngokuzimela, bahlala bezama ukweqa okulindelwe ngabadlali bethu abangochwepheshe nabaqeqeshiwe. Eqinisweni, sihlala sivivinya ikhwalithi yemikhumbi yethu yokushibilika eqhweni futhi, unyaka nonyaka, siqoqa yonke idatha ukuthuthukisa izinguquko ezifanele, ukuhlangabezana nokudlula izidingo zabagibeli abakhulukazi be-elite nama-freerides.
Ozakwethu ebhizinisini baqinisekisa ukuthi uyakhetha ukushushuluza izibuko I-Uller® iyindlela yakho engcono kakhulu. Ngenxa yobuchwepheshe baso besimanje, siyakwazi ukunikeza incazelo engenakuqhathaniswa kanye nezinga elingenakulinganiswa lokucaca kubo bonke abasubathi abathembela kumikhiqizo yethu. Amalensi wethu we-High Tech Performance Optics X-POLAR aletha umbala omangazayo nophambene nomunye wethu wezingilazi ze-ski nezibuko zokushushuluza. Eqinisweni, ubukhali obukhulu bezibuko zethu zeqhwa kukhulisa ukungafani nokwethembeka kwemibala esizungezile lapho sizijwayeza imidlalo yeqhwa. Ngale ndlela, amaski okushushuluza I-Uller® iletha ubukhali ngaphezu kokujwayelekile noma ezimweni ezinzima kakhulu.
Njengomkhiqizo, inhloso yethu bekulokhu ukunikela ngokuhle kakhulu Izibuko zeSkiemakethe, noma ngabe yizibuko zokushushuluza ze-photochromic noma izibuko zokushushuluza zelensi eziguquguqukayo kazibuthe, noma izibuko ezishushuluza zokushushuluza eqhweni, kuye ngeqoqo ngalinye. Ngenxa yalokho, zonke izibuko zethu zokushushuluza zithuthukisa umbono wezemvelo kanye nokukhululeka kokunethezeka nokuzola kwawo wonke ama-skier.
UKUBALULEKA KAKHULU KWEMALI
Amamodeli we-ski mask owathola kuwebhusayithi yethu ayahluka ngosayizi, umbala nokuma, kepha ngayinye inikela ngekhwalithi ephezulu nokuqina. Sinikeza izinketho ezahlukahlukene, kufaka phakathi amamodeli wezibuko zokushibilika eqhweni, izibuko zokushushuluza lens ezikulo kazibuthe nezibuko zokushushuluza ezinamalensi we-photochromic, kanye nezibuko zeqhwa zezingane, kuya ngokutholakala kwesitoko sethu, esidalwe njenge Idizayini ye-Unisex nokusebenza okuphezulu kakhulu okutholakala emakethe. Ngaphezu kwalokho, sinikeza amamodeli wethu we ukushushuluza izibukoI-Uller® ngezikhathi ezithile izaphulelo ezinkulu endaweni yethu yokushibilika eqhweni. Sithatha lesi sikhathi ukukumema ukuthi ubheke lesi sigaba, futhi ubambe okunikezwayo okungcono kakhulu kwe-ski. Uma esigabeni se-ski ukunikela ungakutholi okulungele wena ngaleso sikhathi esithile, sikumema ukuthi ubheke wonke amaqoqo ethu amaski obuso atholakala kuwebhusayithi yethu, kuleso sigaba esiyinhloko.
Ikhwalithi nokusebenza okuphezulu kwamamodeli wethu we-photochromic ski goggles, izibuko zethu zokushushuluza kwelensi eziguquguqukayo kanye nezibuko ezishushuluza ze-ski zibeke uphawu lwethu phakathi kwemikhiqizo emihle kakhulu yezikebhe ze-blizzard emakethe ngokusho kozakwethu bebhizinisi lethu, ikakhulukazi isilinganiso sethu sekhwalithi. / intengo. Phakathi kwezinhlobonhlobo zethu zezibuko zokushibilika eqhweni sithuthukise amaqoqo wezithombe zokuthwebula eqhweni kanye nezibuko zokushushuluza ezishushuluza ezizivumelanisa nezinga lokukhanya elikhona, ngokuhlukahluka okusukela ku-CAT1. kuya ku-CAT3. Ngakolunye uhlangothi, siyaziqhenya ngokunikela ngamamodeli we-ski goggles eziguquguqukayo kazibuthe, avumela i-skier ukuthi ishintshe ngokushesha amalensi futhi ikhethe isigaba abasidingayo ngokwesimo sezulu nezimo ezikhanyayo ngalolo suku.
IZINZUZO KANYE NEZICI EZIPHUMA UKUTHI UKHETHE
Phakathi kwazo zonke izinzuzo nezinzuzo ezinikezwe ngama-Uller® ski goggles, okungezona ezimbalwa, singagqamisa okulandelayo:
Izibuko ze-Ski ezinokukhanya okulula nokunethezeka.
Umklamo nosayizi kucatshangelwe abesilisa nabesifazane.
Ubuchwepheshe be-X-POLAR obunokuvikelwa kwe-UV-400 kanye nohlelo lwe-Dual Layer AntiFog double layer ukuvimbela ukungaboni kahle.
Uhlelo lokungenisa umoya lwangaphakathi olunama-anti-condensation.
Uzimele wenziwe nge-thermoplastic polyurethane yokukhanya okukhulu.
Ezinye izibuko zethu zokushushuluza zihlanganisa amalensi kazibuthe ashintshanayo. Lezi zinhlobo ziza nengilazi yezinsuku ezishisayo ku-CAT.3 futhi ecacile ngezinsuku zokubonakala okuphansi ku-CAT.1.
Amamodeli wethu amaningi awela ngaphansi kwesigaba se-skar goggles, ngenxa yokuhlukaniswa kwamalensi abo.
Izikegi zethu zokushushuluza ziza nesembozo se-microfiber nezitika ezifakiwe futhi, eziningi zazo, nesembozo esiqinile esingeziwe ukuze ukwazi ukuzigcina ngokuphepha.
Ngezikhathi ezithile sethula ukuqoqwa kwamaski okushushuluza ngamanani amakhulu esitolo sethu sokushushuluza.
IMIKHIQIZO EMIKHULU, UKUSEBENZA KAKHULU KWE-SKI.
Esitolo sethu esiku-inthanethi uthola njalo ukunikezwa kwe-ski okuhle kumamodeli wethu amaningi wezimbungulu kanye nezimaski zeqhwa. Futhi into enhle kakhulu ukuthi iqembu lethu lokuthengisa livuselela ngezikhathi ezithile indawo yokushushuluza kwiwebhusayithi yethu lapho kuqala isikhathi sokuthengisa nge-ski. Kwa-Uller® sithanda ukuklama nokwenza amaski okushushuluzakubagibeli kanye nabasebenza ngokukhululeka abavela kuwo wonke umhlaba. Empeleni, zonke izibuko zokushushuluza ezitholakala kuwebhusayithi yethu futhi nasendaweni yethu yokushushuluza ziphefumulelwe yimvelo, isenzo, ukuzijabulisa nabangane… Lapho sishushuluza sizizwa siphila, siyaphila.
AMAGOGGLE NAMASKI EMAKHAYA AMADODA
Kuwebhusayithi yethu www.ullerco.com siyaziqhenya ngokunikela ngemikhiqizo ye-Uller®, uhlobo lobuchwepheshe lweqembu lemfashini elibonakalayo le-Indicom Brands, elikhethekile ekwakhiweni, ekwenziweni nasekusatshalalisweni kwezimaski zokushushuluza zamadoda nezibuko zokushushuluza zabesilisa zePrimiyamu. Ngalesi sizathu, zonke izibuko zokushushuluza kwamadoda ethu nezimaski zethu zabesilisa beqhwa leqhwa zenziwa ngabasebenza ngokukhululeka abasebenza kakhulu kwezobuchwepheshe, abahlala befuna abasubathi abasezingeni eliphakeme, ochwepheshe kanye nabaphelele, ukuze bafeze ukusebenza kwabo okuphezulu kakhulu lapho beziqeqesha. Ezemidlalo.
Izibuko zethu zokushushuluza zamadoda zikulungele ukunakekela umbono wabashushuluzi ezimweni ezimbi kakhulu ngesikhathi seFreeride. Zonke izimaski zokushushuluza zamadoda ze-Uller® ezitholakala kuwebhusayithi yethu zidalwe ngokuya ngezidingo zethimba lethu le-freerider, elifuna okuphezulu kakhulu kumkhiqizo, kokubili ezintweni zokwakha nokunethezeka. Siyaziqhenya isizini ngayinye ngokwazi ukuklama nokunikela ngezinhlobonhlobo ezingcono nezithuthuke kakhudlwana zemigodi yokushibilika eqhweni lamadoda nezibuko zokushushuluza eqhweni zamadoda.
I-Uller® iwuphawu lwezinhlobonhlobo zezemidlalo ezenzelwe abathandi bezemidlalo abasezingeni eliphakeme. I-Uller, phakathi kweminye imikhiqizo, ithuthukisa eminye ski buso indodaezinokusebenza okuphezulu kakhulu kwezobuchwepheshe. Ngakho-ke, sinikela ngezinhlobo ezahlukahlukene zama-ski goggles nezimaski zekhwalithi ye-premium, ezenzelwe abakwa-freeriders, futhi ezenziwe ngezinto ezinhle kakhulu emakethe. Ngamunye wabo uqinisekisa ukusebenza okuhle nokuthembeka okuphezulu ezimweni ezimbi kakhulu ngesikhathi sokushushuluza nokushushuluza.
Ngezikhathi ezithile, sibuyekeza ukuqoqwa kwethu kwe-ski mask ukunikela ngemikhiqizo ehamba phambili kulesi sigaba. Amanye amaqoqo ethu afaka izibuko zokushushuluza ze-photochromic ski zabesilisa, abanye banikela ngemibono yokushushuluza eqhweni yamadoda, futhi amaqoqo ethu amaningi angaba nawo i-ski goggles lens lens eguquguqukayo indoda. Kodwa-ke, imininingwane yemodeli ethile ethize etholakala kuwebhusayithi yethu izohlala incike ekuqoqweni kwethu kwamaski okushushuluza walowo nyaka, kanye nokutholakala kwesitoko sethu.
Siqinisekisa ukuthi zonke izifihla-buso zabesilisa bethu zinencazelo lapho sichaza khona izici zalezi zibuko. Ngale ndlela, ngaphandle kokuthi zonke izibuko zamadoda ethu eqhwa zingama-premium aphezulu, akuwona wonke amaqoqo ethu anezinzuzo ezifanayo. Ngakho-ke, sikumema ukuthi ubheke kahle izinkomba zokuthi sishiya kumkhiqizo ngamunye esitolo sethu se-inthanethi, ukuze ukwazi ukukhetha ngqo ski buso indoda ezizanelisa kahle izidingo zakho njenge-skier.
Uma sicabanga ngezinzuzo ezihlinzekwa izibuko zokushibilika eqhweni lamadoda e-Uller®, okungezona ezimbalwa, okunye okuphawuleka kakhulu ukuthi banikela ngobuchwepheshe obusika kakhulu kuma-optics emhlabeni esigabeni sabo. Sikhuluma nge-High Tech Performance Optics X-POLAR, ekhona ezinhlobonhlobo zethu eziningi zemikhumbi yabesilisa yokushushuluza etholakala kuwebhusayithi yethu, ngokusho kokucaciswa nokutholakala kweqoqo ngalinye. Ngokuqondile lokhu, kuhlanganiswe nekhwalithi yethu ephelele yezinto zokwakha nokukhiqiza, kanye nensizakalo yethu yokusabalalisa nokulethwa, yikhona okuhlukanisa ngempela izibuko zokushushuluza kwabesilisa ze-Uller® kuyo yonke eminye imikhiqizo etholakala emakethe namuhla. Ngokunjalo, njengoba sihlala senza, i-Uller® ibuye ibe ngumkhiqizo osebenzisa amasu okuthuthuka okuqhubekayo futhi, ngakho-ke, ngezikhathi ezithile yenza yonke imikhiqizo nezinsizakalo zayo zibe ngezintsha ukuze zihlale zisezingeni labasubathi abasezingeni eliphakeme.
Ubuchwepheshe be-Optics X-Polar ezibukweni zethu zokushushuluza besilisa yisibonelo esisodwa salesi sifiso sokuqhubeka sithuthuka. Eqinisweni, izibuko zokushibilika eqhweni lamadoda e-Uller® ezinobuchwepheshe belensi ye-X-Polar zinikela ngobukhali obukhulu obukhulisa ukungafani nokuthembeka kombala. Lezi zibuko zokushibilika eqhweni zamadoda, kanye nezingasetshenzisiwe, zinale nzuzo ehlukile, ethuthukisa umbono wezemvelo kanye nokukhululeka. Izibuko zokushushuluza eqhweni lamadoda ethu, izibuko ezishushuluza zelensi zamadoda ethu futhi, ngokuvamile, lonke uhla lwethu oluningi lwezibuko zokushibilika eqhweni, zinikeza incazelo ephelele nokucaca okudlula okujwayelekile, futhi okunikeza ukugqama okumangazayo nombala.
Khumbula ukuthi ungathenga ukushushuluza izibuko esezingeni eliphakeme esigabeni sethu samadoda eshibhini sokushushuluza futhi uthole ukunikezwa kwe-ski yamadoda okuzokumangaza.
Ngabe imaskhi yamadoda e-Uller® brand ski izolifanela kahle ikhanda lami nesigqoko sokuzivikela?
Ngempela, zonke izibuko zamadoda ethu zokushushuluza zinebhande lokunwebeka eliguquguqukayo lazo zonke izinhlobo zekhanda nesigqoko sokuzivikela. Eqinisweni, amaqoqo ethu amaningi wezigqoko zokushushuluza zamadoda aneteyipu elwa nokushibilika ukuqinisekisa ukubambelela okuqinile ekhanda lakho nasezindongeni zesigqoko sokuzivikela, ukuze kuvinjelwe ukuhamba nokunyakaza kwabantu. Khumbula ukuthi kubalulekile ukuthi uthenge imaskhi yamadoda esayizi elungile futhi enokulingana okuphelele kusukela lapho, ngokubheka lokhu kuguquguquka ekukhetheni kwakho izibuko zokushushuluza zamadoda akho, ugwema ukuthola ukukhanya okuvela ezinhlangothini nangaphansi. Vele, kubaluleke ngokufanayo ukuthi amalensi owakhethayo abe nobuchwepheshe besimanje ukuze izibuko zamadoda akho eqhwa zivumelane kahle nezimo zezulu futhi ungabi nazinkinga lapho ubhekene nesimo sezulu esingesihle futhi ugcine induduzo nhlobo izikhathi.
Anjani amalensi e-Uller® brand ski goggles?
Ama-lens ezimpawu zethu zokushushuluza zamadoda e-Uller® brand akhiqizwa ngezinto ezingcono kakhulu ukufeza ukumelana okukhulu nobulukhuni emithelelweni, kanye nokuvikelwa okukhulu emisebeni ye-ultraviolet nekhwalithi engcono kakhulu kumbono wakho. Ngale ndlela, izibuko zethu zokushushuluza zamadoda, kanye nezibuko ezishushuluza zelensi zamadoda ethu kanye nezibuko zethu zokushushuluza eqhweni lamadoda zikhululeke kakhulu, ziyamelana futhi zilula, futhi zinikeza induduzo enkulu kunezinye izikhova zeqhwa zamadoda ezikhona emakethe.
Ingabe izibuko zokushibilika eqhweni lamadoda e-Uller® zinobuchwepheshe be-antifog?
Ngempela, izibuko zokushushuluza kwamadoda ethu, kufaka phakathi uhla lwethu lwamagagasi okushushuluza e-photochromic and men's magnetic interchangeable lens ski goggles anesistimu yangaphakathi yokulwa nokungenisa umoya, ethola ukuphindelela okuqhubekayo nokuqhubekayo komoya ukuqinisekisa ukubonakala okuhle kakhulu ngaso sonke isikhathi.
Ngingathola okuhlinzekwayo kumaskhi wamadoda okushushuluza e-Uller® brand kuwebhu?
Sethula ngezikhathi ezithile ukunikezwa kwabashushuluzi besilisa nokwenyusa okukhethekile kumaski wabesilisa okushushuluza kuwebhusayithi yethu. Imvamisa uthola izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo yomkhiqizo we-Uller® i-outi ski indoda, kufaka phakathi izibuko zokushushuluza kwabesilisa, kuya ngokutholakala kwesitoko sethu nesikhathi sonyaka.
Yini okufanele ngiyicabangele lapho ngithenga izibuko zamadoda okushushuluza eqhweni / izigaxa zesibhamu samadoda?
Lapho uthenga i-ski mask yamadoda noma izibuko zeqhwa zabesilisa kufanele:
Bheka kahle isigaba sesihlungi esinelensi yesifihla-buso samadoda akho nokuthi sinethuba lokuyiguqula noma cha. Into ebaluleke kunazo zonke ukuthi ube namalensi wesibhakabhaka wamalensi ashintshashintshayo ongakhetha ngawo isigaba selensi ozoyisebenzisa kuye ngosuku, isikhathi nezimo zezulu onamathela kuzo. Enye indlela ukukhetha izibuko zabesilisa zokushushuluza i-photochromic ezihluka phakathi kwe-CAT1. ne-CAT 3, okuyizona ezisetshenziswa kakhulu.
Khetha i-goggle ski yamadoda ehlukanisiwe noma i-goggle yamadoda ehambisana nezigqoko zokuhamba eqhweni naseqhweni.
Qinisekisa ukuthi izigqoko zeqhwa zamadoda akho zineteyipu enesistimu yokulwa nokushelela ukuqinisekisa ukubambelela ngokuqinile ezindongeni zesigqoko sokuzivikela nokuvimbela ukuhamba kwazo nokuhamba kwazo. Khumbula ukuthi ingcindezi okufanele uyizwe kufanele ilunge impela, ingabi yisixakaxaka noma ikhululeke kakhulu.
Kufanele ukhethe ozimele be-Unisex abakhulu kakhulu noma abancane kakhulu. Ngokuvula izibuko zokushushuluza kwamadoda akho, hlola inkambu yokubuka oyithola ngokubheka eceleni naphezulu / phansi. Uma uqaphela ukuthi unenkambu yokubona encishisiwe, le maski ingaba ncane kakhulu. Izikebhe zokushushuluza zamadoda ezinama-unisex ozimele kuyindlela engcono kakhulu.
Kukhona izibuko zokushushuluza zamadoda ngesihlungi esihlukaniswe kahle, ngakho-ke enye inketho enhle ukukhetha izibuko zokushushuluza zamadoda uma ufuna zithole le nzuzo futhi zisuse ukubonakaliswa okukhanyayo okungabangelwa yilanga lapho kushaywa iqhwa.
Kufanele uqiniseke ukuthi izibuko zokushushuluza zamadoda akho zinohlelo lokulwa nenkungu. I-Uller® inikela ngamamodeli anamalensi anezendlalelo eziphindwe kabili zokwephula ibhuloho elishisayo futhi ngaleyo ndlela agweme inkungu nokuncipha, okukuvumela ukuba ube nokucaca okuphelele ngenkathi ushibilika kunoma yisiphi isimo sezulu.
Hlala ucabanga ngokunethezeka kwakho nokulingana kahle lapho uthenga izibuko zokushushuluza zamadoda akho.
Khetha izibuko zokushushuluza zamadoda ngesikimu sombala esivumelana nesitayela sakho nobuntu bakho.
Sizakale ngesigaba samadoda eshibilika eqhweni lethu ukuze uthenge izingilazi ezisezingeni eliphakeme kakhulu ngokunikezwa kwe-ski kwabesilisa.
Yini efakiwe nama-ski goggles ami e-Uller® brand brand's?
Ibhokisi ngalinye kanye nesethi yamacala wezikhumulo zama-ski ski eziguquguqukayo zamadoda ethu ziza nezinto ezilandelayo:
Imaski yeqhwa lamadoda e-Uller®.
Ama-lens amabili: 2 ngelanga nokukodwa kokubonakala okuphansi.
Ikesi eliphethe kanzima.
Ikhava le-microfiber eliguquguqukayo.
Yiziphi izici ezibalulekile okufanele izibuko zokushushuluza zamadoda ezihamba phambili zibe nazo?
Izigqoko ze-ski ezihamba phambili zamadoda zinikeza isiqinisekiso sekhwalithi. Kubalulekile ukuthi izifihla-buso zamadoda akho zibe nesiqinisekiso sekhwalithi ye-European Union ngophawu lwe-CE.
Impact impahla emelana nokuphepha okukhulu lapho uqhuba imidlalo ye-adventure eqhweni. Okokusebenza okungazweli njengalokhu esikusebenzisa kwizibuko zethu zokushushuluza zamadoda e-Uller®, kunikeza ukuphepha okuphezulu futhi, ngakho-ke, ukuthula kwengqondo okuphelele lapho uqhuba umdlalo wakho weqhwa owuthandayo. Okufanelekile, imaski yakho yokushushuluza yamadoda kufanele futhi ibe nokuqiniswa endaweni yamathempeli nasekuvinjeni kwekhala ukuvikeleka okukhulu ezindaweni ezizwelayo.
Ukuvikelwa kwe-UV - 400. Amabhodi okushibilika eqhweni lamadoda kufanele akwazi ukuvikela ukubona kwakho ezinsukwini ezinelanga, ngisho nalezo ezinamafu, emisebeni yelanga ye-ultraviolet.
Nikeza umbono wangaphandle. Khumbula ukuthi ukushibilika eqhweni kudinga inkambu ebanzi yombono ukuthola abashushuluzi beza ngejubane elikhulu ezindaweni eziseceleni, kanye nokukhululeka kwezintaba nezinye izinhlobo zezingozi noma izici zomhlaba.
Ama-lens wezigqoko zakho zokushushuluza zamadoda kufanele abanzi ukuze akuvumele ukuthi ubonakale kahle. Ngaphezu kwalokho, amalensi ezibuko zokushushuluza kwabesilisa kufanele abe nokugqama okuhle kombala nobukhali, uma kungenjalo ngeke ushibilikise emithambekeni ngaphansi kwezimo ezinhle kakhulu.
Usukulungele ukuthenga umbhangqwana wakho olandelayo wama-ski goggles / we-ski goggles? Khumbula ukuthi ngokuqhubekayo sivivinya imikhiqizo yethu ngekhwalithi futhi siqoqa yonke imininingwane, unyaka nonyaka, ukuze sikwazi ukuthuthukisa izinguquko ezifanele ezibhukwini zethu zokushushuluza besilisa, size sihlangabezane nezidingo zabagibeli abafuna kakhulu. Asingabazi ukuthi i- ski izibuko indoda Yimikhiqizo eyi-100% ye-premium esezingeni eliphakeme. Zibonele izinzuzo zamaqoqo ethu ezimaski ze-blizzard, bese uthola ukunikezwa kwethu okushushuluza kwamadoda esigabeni sabesilisa sokushushuluza e-webhusayithi yethu!
AMAGOGO NAMASIKI ABESIFAZANE
Kwa-Uller® sinemikhiqizo enhlobonhlobo, uhlobo lobuchwepheshe lweqembu lemfashini ebonakalayo ezemidlalo Izinkomba Brands. Siyaziqhenya ngokufaka izinhlobo ezahlukahlukene ze ski buso owesifazanengokusebenza okuphezulu kwazo zonke izilaleli zethu zesifazane. Eqinisweni, i-Uller® igxile ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekusatshalalisweni kokuhamba phambili ski buso owesifazane nowesilisaemakethe namuhla.
Ngokwababambisene bethu bezentengiselwano, ku-www.ullerco.com uzothola imikhiqizo engcono kakhulu yemfashini yemidlalo yeqhwa, eyenzelwe ukwanelisa izidingo ezifuna kakhulu zabasubathi bethu, abesilisa nabesifazane. Ngakho-ke, phakathi kwabo sifaka phakathi ukukhethwa okubanzi kwama-ski goggles anenhlanganisela enkulu yemibala nezitayela. Ngokuya ngokutholakala kwabo kusitoko sethu, amamodeli amaningi we ski izibuko sowesifazaneetholakala kuwebhusayithi yethu ungabathola nasezigabeni zethu zabesifazane zokushushuluza eqhweni, lapho siqala khona ukunikezwa kwezikebhe zabesifazane ngezikhathi ezithile ngokwesikhathi sonyaka.
Uma unesibindi sokwazi, cishe, iziphi izibuko zokushushuluza zabesifazane ezitholakala esitolo sethu esiku-inthanethi, sikumema ukuthi uqhubeke ufunde! Nalu uhlu lwezimfanelo eziyinhloko ezibonisa izibuko zethu zokushushuluza kwabesifazane:
Izibuko zethu zeqhwa zabesifazane zivame ukuba nosayizi nemodeli ye-Unisex. Ngale ndlela, zingasetshenziswa ngabesifazane nabesilisa. Sinamamodeli amakhulu futhi amancane, akhethwa ngabesilisa nabesifazane ngokuya ngokuthanda kwabo.
Ngezikhathi ezithile, kuya ngokutholakala kwesitoko sethu, sinikeza amaqoqo wamalensi abashintshana kazibuthe abashushuluza izibuko okulula ukuwashintsha ngemizuzwana embalwa. Lokhu kuqoqwa kwezigilikisi zabesifazane zokushushuluza kuza namalensi ama-2 afakiwe: i-1 yezinsuku ezinelanga ku-CAT. 3 nenye, ecacile, yezinsuku zokubonakala okuphansi ku-CAT.
Ngokuya ngokutholakala kwethu, sinikezela nangokuqoqwa kweziglasi zokushushuluza zabesifazane ezinamalensi anobuchwepheshe be-X-POLAR kanye nohlelo lwe-Dual Layer double layer system. Inkungu ka-Anti(anti fog), evimbela izibuko zabesifazane zokushushuluza ekufikeni.
Izibuko zethu zokushushuluza zabesifazane, kufaka phakathi izibuko zokushushuluza zabesifazane, kanye nezibuko zethu zabesifazane zokushushuluza zihambisana nokuvikelwa kwe-UV-400 kuwo wonke amalensi abo.
Onke amaqoqo ethu ezibuko ezishushuluza besifazane anohlelo lokungenisa umoya lwangaphakathi olunama-anti-condensation. Lokhu kuvumela ukuphindaphinda okuqhubekayo komoya ngaphakathi kwesifihla-buso sabesifazane, futhi kuqinisekisa ukubonakala okuhle.
Zonke izibuko zethu zeqhwa zabesifazane zifaka iteyipu engasheleliI-Anti-Slip Strap) ngokulungiswa okuphelele kwamamaski e-ski abesifazane / izifihla-buso zabesifazane ezinezigqoko zokuvikela ezinobukhulu obuhlukahlukene.
Izibuko zethu zokushibilika eqhweni zabesifazane zinohlaka olwenziwe ngokukhanya okwedlulele kwe-thermoplastic polyurethane.
Zonke izibuko zokushushuluza zabesifazane, noma ngabe ziyizibuko zokushushuluza zabesifazane, izibuko zokushushuluza zabesifazane, noma izibuko zokushushuluza zelensi zabesifazane, zifaka ikhava ye-microfiber nezitika ezifakiwe.
Sibuyekeza amaqoqo ethu amasiki obuso besifazane kaningi ukunikela ngemikhiqizo ehamba phambili kuleso sigaba. Amanye amaqoqo ethu afaka izibuko zokushushuluza zabesifazane, amanye anikela ngamagoglikhi okushushuluza e-photochromic ski, futhi amaqoqo ethu amaningi angaba yizibuko ezishushuluza zezintambo zabesifazane. Imininingwane yemodeli ngayinye ethile izohlala incike enkulumweni yamamaski e-ski abesifazane alowo nyaka, kanye nokutholakala kwesitoko sethu.
Uma ufuna ukwazi ngokuningiliziwe ukuthi buso bamaskhi bethu besifazane bunjani, siyaqinisekisa ukuthi imodeli ngayinye inencazelo esichaza kuyo izici zalokho okushiwo ski izibuko sowesifazane. Ngale ndlela, ngaphandle kokuthi zonke izibuko zethu zabesifazane beqhwa zingama-premium aphezulu, akuwona wonke amaqoqo ethu anezinzuzo ezifanayo. Ngalesi sizathu, sikumema ukuthi ubheke kahle izinkomba zomkhiqizo ngamunye esitolo sethu esiku-inthanethi, ukuze ukwazi ukukhetha ngqo imaskhi yamadoda okushushuluza ehlangabezana kahle nezidingo zakho njenge-skier.
Ukunikezwa kwethu kwemikhiqizo namaski eqhwa imvamisa kuhluka kakhulu. Eqinisweni, njengoba sishilo ngaphambili, ngokusho kwamaqoqo ahlukene atholakala kuwebhusayithi ye-Uller®, ungathola izibuko zabesifazane zokushushuluza ezisukela esigabeni 1 kuya ku-3, noma amaqoqo wabesifazane kazibuthe wamalensi ashintshashintshayo, ahlanganisa amalensi amabili, elilodwa livela isigaba ngasinye esishiwo.
Njengoba sichazile ngenhla, siyakukhumbuza ukuthi sinamaqoqo wethu amamodeli angenakubalwa osayizi nemibala ehlukene ehambelana nokuthandwa ngabesilisa nabesifazane. Ngakho-ke, wonke amamodeli wezigqiki zabesifazane zokushushuluza kanye ski izibuko sowesifazane Umkhiqizo we-Uller® nawo yi-unisex futhi, ngakho-ke, ukwakheka nokukhiqizwa kwabo kucatshangwa ngendlela yokuthi bakwazi ukulingana futhi bazivumelanise ngokuphelele nabesilisa nabesifazane. Uma ufuna ukuthenga umkhiqizo kumaqoqo ethu we ski buso owesifazaneUller® brand ungakwenza ngokuphepha ku-www.ullerco.com. Ngaphezu kwalokho, sikumema ukuthi ufinyelele esigabeni sethu sabesifazane sokushushuluza eqhweni futhi ujabulele zonke izaphulelo, ukukhushulwa kanye nokunikezwa kweqhwa labesifazane esinakho.
Injani inqubo yokuthengwa kwe-inthanethi yama-gogiles wabesifazane?
Inqubo yokuthengwa kwe-intanethi yamaskhi besifazane bethu ishesha kakhulu, intofontofo futhi ilula, njengoba kunjalo ngayo yonke eminye imikhiqizo etholakala kuwebhusayithi yethu. Uma usuchofoze esigabeni bese ukhetha imaskhi yabesifazane yokushushuluza ofuna ukuyithenga, umane ubangeze enqoleni yakho yokuthenga kanye nemininingwane yakho yokuthumela. Into elandelayo kuzoba ukukhokhela izibuko zakho zokushushuluza ngendlela ephathekayo nangendlela evikelekile ngesango lethu lokukhokha elinesitifiketi se-SSL. Isikhathi sokulethwa se- ski buso owesifazane kuzoncika ezweni lokuthumela.
Ngingakwazi ukuthola amamodeli wamalensi abashintshana ngamalensi wabesifazane kwiwebhusayithi ye-Uller?
Ngezikhathi ezithile sethula amaqoqo kuwebhusayithi yethu i-ski goggles lens lens eguquguqukayo yowesifazane esinikela ngabo bonke abadlali bethu. Noma kunjalo, ukutholakala kwayo kuncike ngqo esitokisini sethu. Khumbula ukuthi lolu hlobo lwezibuko zokushushuluza zabesifazane lunamalensi ama-2, elilodwa elezinsuku ezibalele kanti elinye elezinsuku zokubonakala okuphansi. Ama-lens wamalensi ashintshanayo kazibuthe wabesifazane atholakala kuwebhusayithi yethu avumela ushintsho lwamalensi alula futhi asheshayo ngemizuzwana engaphansi kwemibili.
Ngingakwazi ukuthola izibuko ezishushuluza eqhweni labesifazane kwiwebhusayithi ye-Uller®?
Sivame ukushicilela amaqoqo we photochromic ski goggles owesifazanekuwebhusayithi yethu, itholakala kubo bonke abashushuluzayo. Siyaqinisekisa ukuthi ukutholakala kwayo kuncike ngqo kusitoko sethu. Khumbula ukuthi amalensi wethu we-photochromic ahlukaniswe ngokukhanya avumelanisa ukukhanya kwawo nezimo zezulu ezahlukahlukene. Zonke izibuko zethu zokushushuluza zabesifazane ze-photochromic ziyahlukahluka ukusuka ku-CAT.1 kuye ku-CAT. Ngenxa yokusebenza kwabo ngezindlela eziningi, izibuko zethu zokushushuluza zabesifazane ze-photochromic zizokunikeza ukusebenza okuphezulu kakhulu ezinsukwini ezishisayo nangezinsuku ezinezimo zezulu ezimbi.
Ngingakwazi ukuthola amamodeli wezigqoko zokushushuluza zabesifazane esitolo se-Uller online?
Sihlala sinikela ngamamodeli wezigqoko zokushushuluza zabesifazane kwiwebhusayithi ye-Uller®, konke kuncike ekutholakaleni kwesitoko sethu kanye namaqoqo esiwethula ngalowo nyaka. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi uthole ezinye zezinhlobo zethu zezikebhe zokushushuluza zabesifazane ngamanani ezaphulelo esigabeni sabesifazane sokushushuluza ngoba, ngezikhathi zonyaka zokuthengisa, wonke amamaski anokunikezwa kwe-ski kwabesifazane ayatholakala kumakhasimende ethu kuleso sigaba .
Lunjani uhlelo lokungenisa umoya lwangaphakathi lwe-Uller® brand ski masks?
Izikebhe zokushushuluza zabesifazane ze-Uller® zinohlelo lwangaphakathi lokulwa nokungenisa umoya oluthanda ukuvuselelwa komoya okuqhubekayo. Izibuko zethu zeqhwa zabesifazane ziqinisekisa ukungena komoya ngaso sonke isikhathi ngesikhathi semidlalo. Ngaphezu kwalokho, izibuko zokushushuluza zabesifazane zinikeza ukubonakala okuphezulu kakhulu ukuze abagijimi abangochwepheshe kanye nabasebenza ngokuzimela baphephe phakathi nomsebenzi wabo ezintabeni.
Ngabe isigqoko sokuzivikela ski sohlobo lwabesifazane se-Uller® siyahambisana?
Ngempela, ukwakheka kwe- ski buso owesifazaneZenzelwe ukuhambisana nezigqoko zokuthwebula eqhweni naseqhweni. Eqinisweni, i-anti-slip tape ye- amaski okushushuluza mujer ye-Uller® yenzelwe ukunikela ngokulungiswa okuphelele kokushilo ski izibuko sowesifazane kuya esigqokweni. Ngaphezu kwalokho, siklama zonke izinhlobo zethu ngendlela ehlukahlukene kakhulu, kucatshangelwa ukulingana nenqwaba yezigqoko emakethe. Ungasebenzisa zombili izesekeli ezibalulekile ekuvikeleni ikhanda lakho ngasikhathi sinye.
Sihlale njalo sikhetha ukunikela ski izibuko sowesifazaneukumelana okuphezulu nobulukhuni ekulweni nemithelela, ukuvikelwa okuhle kakhulu emisebeni yelanga, kanye nezinga eliphakeme kakhulu lobukhali nokubonakala. Kwa-Uller® siyaziqhenya ngokunika abashushuluzi bethu amaqoqo amaningi we ski izibuko sowesifazaneezenzelwe ukuzivikela ezimweni zezulu ezimbi kakhulu ezingazithola ezintabeni, ngale kwelanga, isibonelo, imvula, inkungu, umoya. Izinto ze ski izibuko sowesifazanelokho esikufaka emaqoqweni ethu kuklanyelwe ukumelana nanoma yikuphi ukushintsha kwesimo sezulu nanoma yikuphi ukushaywa noma ukuwa ukuze kunikezwe ukuvikeleka okuphezulu kulezi zimfuno. Khumbula ukuthi ngamunye amamodeli wethu we ski izibuko sowesifazane Umkhiqizo we-Uller® ungatholakala esigabeni sethu sabesifazane sokushushuluza e-webhusayithi yethu, lapho ungathola khona okunikezwayo okungcono kakhulu kwabesifazane besizini kule sizini.
Ngitshele ukuthi uqeqesha kanjani futhi ngizokutshela ukuthi uncintisana kanjani